नेपालमा कोरोना भ्याक्सिन : उत्पादनको सम्भावना र सरकारको तयारी « Janata Samachar
नेपालमा कोरोना भ्याक्सिन : उत्पादनको सम्भावना र सरकारको तयारी
काठमाडौं । कोभिड –१९ विरुद्ध विश्वका विभिन्न देशहरुले विभिन्न प्रकारका भ्याक्सिन उत्पादन गर्दै त्यसको सफल परीक्षण समेत गरिरहेका छन् । विश्वका विभिन्न देशहरुले कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइमा सफलता हासिल गरिरहँदा नेपाल सरकारले भने नेपालमै भ्याक्सिन उत्पादन हुन सक्ने सम्भाव्यताबारे खासै चासो देखाएको पाइदैन ।
विश्वका विभिन्न देशहरुले कोभिड –१९ विरुद्धको भ्याक्सिन विभिन्न चरणमा परीक्षण गरिरहँदा नेपालमा पनि यसको उत्पादनको सम्भावना कस्तो छ त भन्ने चासोको विषय हो । के नेपालमा पनि कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप बन्न सम्भव छ त ? के नेपालमा खोपको उत्पादनमा केही तयारी भइरहेको छ त ?
नेपालमा पनि अहिले औसतमा दैनिक २ हजार ५ सय जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण भइरहेको छ । तर नेपालमा भने हालसम्म पनि कोरोना भाइरसविरुद्धको भ्याक्सिनको भने कुनै तयारी भएको छैन । बरु विदेशमा परीक्षण भइरहेको भ्याक्सिन सफल भएमा त्यो नेपालमा पनि भित्राउने तयारी भने तीब्ररुपमा गरिरहेको पाइएको छ । विभिन्न देशहरुले परीक्षण गरिरहेको खोप सफल भएको खण्डमा नेपालमा पनि त्यसलाई भित्राउने बारे छलफल, बहस र आवश्यक तयारी गरिरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारी कोरोना भाइरस विरुद्ध विभिन्न देशहरुले परीक्षण गरिरहेको खोपबारे जानकारी लिइरहेको बताउँछन् । तत्कालको अवस्थामा नेपालमा कोरोना भाइरसविरुद्ध खोप तथा औषधि बनाउने अवस्था त छैन तर त्यसको आवश्यकता तथा सम्भाव्यता बारे भने सरकारले आवश्यक परामर्शहरु गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले गत बुधबार मात्रै अन्य मुलुकले बनाएको कोरोना भाइरसविरुद्धको भ्याक्सिन नेपालमा पनि परीक्षण गर्ने कानुनी बाटो खुलाएको थियो । आपतकालीन औषधि र खोप प्रयोगलाई सहज बनाउन सरकारले सिफारिस गरेको औषधि सम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत बुधबार जारी गर्नुभएको थियो । यो सँगै अन्य मुलुकमा अनुमति पाएको खोपको क्लिनिकल ट्रायल नेपालमा पनि गर्न पाउने कानुनी आधार तयार भएको छ । कुनै पनि विदेशी मुलुकको सरकार वा सम्बन्धित नियामक निकायको अनुमति बमोजिम क्लिनिकल ट्रायलमा रहेको खोप विकास गर्ने संस्था वा कम्पनीले त्यस्तो खोपको क्लिनिक ट्रायल गर्न चाहेमा नेपाल सरकारले अनुमति दिन सक्नेछ । जसको लागि सरकारले विज्ञ टोली नै बनाएर ती देशहरुमा भइरहेको खोप परीक्षणको अवस्था र नेपालमा ल्याउनको लागि आवश्यक पर्ने कानुनी पाटोदेखि चिकित्सकीय पाटो, त्यसको ढुवानी तथा भण्डारणका बारेमा समेत सरकारको समन्वयमा मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको मन्त्रालयले बताएको छ ।
यसअघि क्लिनिकल ट्रायल गर्ने कुनै कानूनी आधार नहुँदा कुनै स्वदेशी तथा विदेशी संस्थाहरुले नेपालमा आउन चाहे पनि आउन पाएका थिएनन् । अहिलेसम्म अमेरिका, चिन, रुस, बेलायत सहितका करिब एक दर्जन देशहरुले कोभिड–१९ विरुद्धको भ्याक्सिन अर्थात् खोप विभिन्न चरणमा परीक्षण गरिरहेका छन् । जसमध्ये ९५ प्रतिशत सम्म सफल भएको समेत प्रतिवेदनहरु सार्वजानिक हुदैँ आएका छन् ।
हुन त ती भ्याक्सिन अहिले पनि परीक्षणकै चरणमा छन् । मन्त्रालयले नेपालमा पनि सहजै ल्याउन सकिने व्यवस्थाका साथ काम गरिरहेको जनाएको छ । महामारीका रूपमा फैलिएको संक्रामक रोगको रोकथाम र नियन्त्रण तथा निर्मूल गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनमा सूचीकृत भएका वा सम्बन्धित मुलुकको औषधि नियामक निकायले दर्ता गरेका वा त्यस्ता नियामक निकायले आपतकालीन प्रयोगको अनुमति प्रदान गरेका औषधि तथा खोपलाई नेपालमा आपत्कालीन प्रयोगका लागि औषधि सल्लाहकार समितिको सिफारिसमा विभागले दर्ता गर्नेछ । तर कुनै विदेशी कम्पनी वा नेपालकै निजी कम्पनीले बाहिरी मुलुकबाट ल्याएर नेपालमा भ्यक्सिनको परीक्षण गर्नको लागि अनुमति भने मागेका छैनन् ।
यसरी प्रयोग गरेको औषधि वा खोपबाट कुनै असर देखिए रोक लगाउन सकिने प्रावधान पनि राखिएको छ । यसबाहेक औषधि प्रयोग गर्न अनुमति दिने निकाय विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) र अन्य मुलुकले अनुमतिमा रोक लगाए नेपालमा पनि प्रयोग गर्न रोक लगाउने व्यवस्था गरिएको छ । ती भ्याक्सिन पूर्णरुपमा सफल भए नभए बारे विश्व स्वास्थ्य संगठन ‘डब्लुएचओ’ले पनि विशेष निगरानी तथा अनुसन्धान गरिरहेको छ । तत्काल नेपालमा कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिनको परीक्षण गर्न अझै केही समय लाग्ने भएका कारण भ्याक्सिन बन्यो भनेर खुसी भइहाल्ने अवस्था नआएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैले पनि स्वयम नागरिकहरुले नै आवश्यक सुरक्षा र सावधानी अपनाउनु पर्नेमा मन्त्रालयले जोड दिएको छ ।